Wararka Gudaha – Page 239 – Shabakadda Amiirnuur
In Ka Badan 10 Askari oo DF Looga Dilay Sh/dhexe Iyo Madaafiic Lagu Weeraray Buulo-gaduud.
Ciidamada Xarakada Al-Shabaab ayaa 11 askari ka dilay dowladda federalka ah kadib markii ay kula dagaalameen degaanka Gololeey oo u dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeelha dhexe. Sidoo kale ciidamada dowladda ayaa waxaa laga qaatay saanado melleteri oo ay kamid yihiin 2 qori PKM ah iyo dhowr kamid ah hubka […]
Madaxtooyada Muqdisho oo La Duqeeyay Iyo Gaari Amisom Looga Gubay Sh/hoose.
Tiro madaafiic ah ayaa maanta ku hoobatay xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho kuwaasoo hugunkooda laga maqlayay qaar kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Ugu yaraan 5 madfac ayaa lagu garaacay Villadii Soomaaliya xilli uu mashquul badan ka jiray, walow aanan helin inta uu la eg yahay khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac. […]
Ciidamada Xarakada Al-Shabaab ayaa saacad ka hor si buuxda ula wareegay degaanka Diif ee gobolka Jubada hoose kadib dagaal muddo socday oo dhex maray iyaga iyo ciidamada Jubbaland ee Kenyaatiga la shaqeeya. Degaankan oo dhaca xuduud beenaadka Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa saldhig weyn ku lahaa askarta Jubbaland, waxaana dhacday […]